Bilayska Kenya oo baaraya ciddii ka dambaysay qarax saaka ka dhacay xaafadda Isli. – Radio Daljir
Nofeembar 6, 2012 4:54 b 0
Nairobi, Oct 06 – Ciidamada nabadgalyada ee xaafadda Isli, ayaa ku hawllan baaritaanno la xiriira dadkii ka dambeeyey qarax saaka aroortii ka dhacay Isli, kaasoo ay ku dhaawacmeen illaa saddex ruux.
Bilayska, ayaan wali faahfaahin ka bixin waxa ay ku ogaadeen baaritaankoodaas, hase ahaatee war hordhac ah oo ay war-fidiyeennada siiyeen ayay ku sheegeen in ay daba-joogaan raadad lala xiriirinayo ku lug-lahaanta falka weerar ee dhacay.
Bilaysku, waxay kaloo sheegeen qaraxa saaka dhacay in uu ahaa mid gacan ku samays ah, saamaynta uu gaystayna ay ku ekayd 3 qof oo dhaawacyo fudud ay soo gaareen, kuwaasi oo goobta wax ka dhaceen ka ag-dhawaa.
Ma cadda cidda si rasmiga ah qaraxaasi loola beegsanayey, waxaana uu dhacay xilli subaxnimo ah oo dadku ay ku sii jeedeen goobahooda shaqo.
Horay ayaa sidaan oo kale meelo badan oo ka mid ah dalka Kenya, waxaa uga dhacay qaraxyo kan oo kale ah, kuwaasi oo uu ugu dambeeyey mid Axaddii todobaadkaan lala beegsaday Kaniisad bilaysku ku cibaadaystaan oo ku taalla magaalada Gaarisa.